INHLANZI: Thatha futhi ulinganise ukuzibandakanya komsebenzisi emcimbini wakho olandelayo | Martech Zone
I-FISH isekela ama-brand, abahleli bemicimbi, namaligi ezemidlalo, ngohlelo lokusebenza lomcimbi olwenza ukuqoqwa kwedatha yabathengi, lusize ukubandakanyeka kwabalandeli ekusebenzeni komkhiqizo, futhi inikeze abalandeli ikhono lokuqoqa okuqukethwe, ukufaka ama-sweepstakes, nokwabelana ngamava ngemithombo yezokuxhumana.
Noma ngabe kuthathwa ukuqoqwa kwedatha emicimbini yamarquee, ukukala isimilo sababekhona emicimbini yezinkampani noma ukuqapha ukuzibandakanya kwabathengi engqungqutheleni, i-FISH ingalinganisa konke ukuziphatha kwabavakashi. Ideshibhodi yokubika ye-FISH inikeza ukufinyelela okusheshayo kumamethrikhi abucayi, kufaka phakathi ukungena kokubhaliswa, ukubandakanyeka kwempahla, izikhathi zomugqa, ukulandwa kwamaselula, ama-SME Engagements, nokuningi.
Ipulatifomu ye-FISH empeleni i-Live Event Operating System enika amandla abahleli bemicimbi ukuze baqoqe idatha yabathengi, ngenkathi ngasikhathi sinye benza indawo engenabango kubalandeli ukuthi bahlanganyele kalula ukwenziwa kwemikhiqizo, baqoqe okuqukethwe, bafake ama-sweepstake, futhi babelane ngamava ngemithombo yezokuxhumana. UMichael Gilvar, isikhulu esiphezulu ku-FISH.
Iminikelo ye-FISH Faka
Ideshibhodi yokukala - Ukuqapha nokubika ngomsebenzi womcimbi. Abaphathi bemicimbi nabenzi bezinqumo banokufinyelela ngokushesha kumamethrikhi abucayi, kufaka phakathi ukubhaliswa, ukuzibandakanya kwempahla, izikhathi zomugqa, ukulandwa kwamaselula, nokuningi.
RFID Solutions - I-FISH ihlanganisa zonke izinhlobo ze-RFID, kufaka phakathi i-HF, UHF, NFC, ne-UWB. Basebenzisa i-RFID ukwenza kube nokushintshaniswa kwenani phakathi kwabathengi nemikhiqizo - okuvumela abathengi ukuthi baqoqe kalula okuqukethwe, babelane ngolwazi ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana, futhi bathole ukufinyelela okugunyaziwe - ngenkathi bevumela umkhiqizo ukuthi ubheke indlela yokuziphatha kwabathengi futhi bahambise imiyalezo ebhaliwe ngesikhathi sangempela.
Ukubhaliswa Kwamaselula - ipulatifomu yokubhalisa imicimbi lapho abalandeli bengabhalisa futhi badlule ngokuphelele ukubhaliswa kwesayithi. Lapho umlandeli ebhalisile, ngeke kudingeke ukuthi baqoqe isayithi lokuqinisekisa, kepha kunalokho, bazoba namandla okusebenzisa idivayisi yabo ephathekayo njengomakhenikha wokuzibandakanya onsite. Abalandeli bazokwabelana ngemininingwane yabo yokuxhumana ngefomu lewebhu elihambayo, bese banikezwa izinketho zokusebenzisa i-eVoucher yabo yeselula (efakwe kuhlelo, noma ihanjiswe ngeSMS). Isistimu yabo ubuchwepheshe be-agnostic - evumela ukuthi idivayisi isebenzise noma yibuphi ubuchwepheshe obutholakalayo kufaka phakathi i-BLE, QR, noma i-NFC.
Izinhlelo Zokuhola Zokuhola - I-FISH inikeza amasistimu wokubhalisa wangaphambi komcimbi, esizeni, namaselula avumela ama-brand ukuthi aqoqe kahle idatha yezivakashi, anciphise ulayini, futhi enze lula ukushintshaniswa kwenani elicacile phakathi kwezivakashi nemikhiqizo. Onke amapulatifomu wedatha ahlanganiswe ngaphandle komthungo ne-CRM yangemuva nezinhlelo zokubika.
Amathuluzi Wenxusa Lomkhiqizo - Abasebenzi be-Onsite abane-RFID Read / Bhala amathebulethi anekhono lomkhiqizo we-Brand noma amadivayisi weselula avumela imikhiqizo ukubhalisa izivakashi, ukuletha okuqukethwe, ukuthatha izithombe namavidiyo ahehayo, ukwenza lula okuthunyelwe kwezokuxhumana, bese ucindezela izithombe ezinophawu ku-Social Media - noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi.
Amasistimu Okulawula Ukufinyelela - Ukufaka amabhande esihlakala e-RFID, ama-VIP Access Credentials kanye neminye imishini, i-FISH inikeza amasistimu wokulawula ukufinyelela ukufinyelela kahle ukuphatha ukufinyelela kwezivakashi kuzo zonke izinhlobo zemicimbi nezindawo, kufaka phakathi iMarquee Events, Charity Events kanye neMikhosi. Isistimu yabo inikeza ukubikwa kwesikhathi sangempela, kunikezela ngokuhlaziywa okwenzekayo kwawo wonke umsebenzi, kanye nokudilizwa kwedatha okufakazelwe kakhulu ebhizinisini.
Izixazululo Zokumaketha Izithombe - I-FISH inikeza izixazululo eziningi zokumaketha isithombe ezenza ukuthi imikhiqizo ithathe izithombe ezingavumelekile zezivakashi zazo ezinezizinda ezinophawu lwenkambiso futhi izithumele ku-Facebook, Instragram, Twitter, kumasayithi eMicro, noma nge-imeyili ngesikhathi sangempela.
Ukuhlanganiswa Kwemidiya Yezenhlalo - Izihambeli zithola imishini yokuxhumana evunyelwe, njengamabhande esihlakala, ama-VIP Passes, ama-fobs okhiye, noma ama-Mobile eVoucher njengoba bengena kokuhlangenwe nakho komkhiqizo. Izivakashi zibhalisa imishini yazo futhi zihlangana ne-akhawunti yazo yezokuxhumana eziyithandayo. Izivakashi zibe sezibandakanya ubuchwepheshe obuzenzakalelayo noma amanxusa omkhiqizo ngama-tablet e-PC azihlola ekusebenzeni ukwenza lula Ukuthandwa, Futhi uthumele izithombe namavidiyo kuma-akhawunti abo ezokuxhumana nabantu ngesikhathi sangempela.
Ama-Analytics - Isikhathi sangempela, idatha elinganisekayo engahunyushelwa ukwenza izinqumo ngokuzayo, ukuhlaziywa kwamasu kanye ne-ROI efakazelwe. I-FISH ayiqoqi kuphela idatha yokubhalisa, kodwa idatha enikeza umongo futhi inika amandla ukwenza izinqumo ezingcono. Okokufakwa kwedatha (okuvame ukubizwa ngokuthi "idatha ye-meta") njengosayizi wonyawo, isimo sezulu, ukukhushulwa, inani labasebenzi, njll. Kuyaqoqwa futhi kuhlaziywe ukusiza amaklayenti abo angagcini nje ngokuqonda imiphumela, kodwa futhi aqonde nokuthi yiziphi izici zokuhlangenwe nakho ezinikela ekushayeleni lezo imiphumela.
Umbhoshongo wethrekhi we-FISH yisixazululo esiyingqayizivele esikwazi ukuqoqa idatha ngethegi ye-RFID. Nayi ividiyo yokubuka konke:
INHLANZI isanda kusebenzisana nabaxhasi bethu e UPostano, kwakhiwa isixazululo sokuqala sohlobo lomuzwa wabalandeli nomkhiqizo wemicimbi, izinkundla nokudayisa okusesitolo. Ukuhlanganiswa kunika amandla imikhiqizo ukuthi ithuthukise ngokuphawulekayo okuhlangenwe nakho komcimbi wabalandeli ngokuxhuma ngokukhululekile ukubhaliswa, ukufaka amabheji, ukwabelana ngomphakathi, kanye nokubukwa komphakathi.
Ipulatifomu ye-FISH inika amandla iningi lomkhiqizo nemicimbi eyaziwa kakhulu emhlabeni, kufaka phakathi i-US Army, i-US Air Force, i-Hyundai, i-Samsung, i-NFL, i-NBA ne-Major League Soccer.
Tags: ukufinyelela izinhlelo zokulawulaamathuluzi enxusa lomkhiqizoizibalo zenkomfaimicimbi yenkampaniumcimbiizibalo zomcimbiukuphathwa kokuhola umcimbiukuphathwa kwemicimbiideshibhodi yokuphathwa kwemicimbiFISHhyundaiabaphathi abaholayoI-Major League SoccerIngqungquthela Yezokumakethaukubhaliswa kweselulaNbanflizixazululo zokumaketha isithombeizinhlelo zokumaketha isithombepostanorfid izixazululoukumaka i-rfidSamsungukuhlanganiswa kwabezindaba kwezenhlaloUS Air ForceAmasosha ase-USisimilo sezivakashi
Nokwakha Ukwakhiwa Kwe-imeyili Ukubamba Ukunakwa Kofundayo